Ningbo Sine magnetic Co., Ltd, waa shirkad xirfad ku hawlan Neodymium magnet (NdFeB), magnet Alnico, magnet Samarium Cobalt (SmCo), magnet ferrite (magnet Ceramic) iyo shirka magnetic in Ningbo, Shiinaha. Waxaana lagu siinayaa fasalka-koowaad waxyaabaha magnetic joogto ah.
Annagu waxaannu leennahay maanka ah dhallinyaro ah oo ah marnaba quusan ruux, wax kasta oo si taxadar leh oo si dhab ah samayn. Waxaan saaray dadaalka oo dhan duurka magnetic wada jir ah ula sannado badan 'aqoon iyo waayo-aragnimo. Waxaan si degdeg ah oo si tartiib ah u horumarsan ka badan 10-sano ee la soo dhaafay oo aad u xajisid dhaqaaqin.
Tayada waa nafta wax soo saarka iyo nolosha ganacsi. Waxaan si joogta ah u tababaraan shaqaalaha si aad u si fiican u yaqaaniin xirfadahooda. Waxaan si adag u fuliyaan Management System Tayo: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, iyo ISO14001: saarka 2004.Advanced iyo qalabka baaritaanka loo hubiyo in waxyaabaha aan la joogta iyo xasiloonida sare sare. Inta badan oo ka mid ah qalabka sare waxaa laga Germany iyo Japan, sida: ICP, qolkii baad, Laser walxaha Analyzer iwm magnet Our waafaqaan shuruudaha CE, RoHS, SGS iyo dardaaran Reach.
magnet waxaa inta badan caadada ka dhigtay sida ay dalabaadka, shuruudaha iyo codsiga macaamiisha ku. kala duwan oo ka mid ah Magnet laga beddeli karaa ee wax kala duwan, fasalka, daahan, qaabka, aragti, jihada magnetization, tirada, iwm Waxaan ku siin karnaa magnet muuqaalo producible kala duwan sida disc, giraanta, laydi, saaraayo, bar, dhululubo, leben, qeybta , dukumiintiyo, gudbikaraa iyo qaar ka mid ah qaababka kale ee gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaan horey u guul leh mass soo saaray magnet-joogta ah ee waxqabadka ugu badan fasalada N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH iyo 38AH.
Waxaan ka gaareen natiijooyin badan dhala inkastoo aynu nahay yada koritaanka suuqa caalamiga ah. Waxaan ku adkeeyey xiriirka ganacsi wanaagsan leh macaamiisha adduunka oo dhan. Waxaan aaminsan nahay in waxaan noqon doonaa lamaanahaaga ganacsi ee ugu wanaagsan mustaqbalka dhow. Waxaan idin siin kara wax soo saarka oo tayo fiican leh qiimaha jaban iyo adeegga ugu wanaagsan. Istaag sida Rafaa noogu bari, duuli si xor ah oo cirka jooga baaxad weyn. Sine loo horumariyo doonaa si joogto ah si ay u noqoto sida ugu fiican ee aad la leedahay tallaabooyinka istaraatijiyad caalami ay.
Waxaan idinku soo dhawaynaynaa inaad nala soo xiriir haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan our shirkadda iyo wax soo saarka. Waxaan ku dadaaleynaa in la wargeliyo, wacyi iyo siiyaan midhaha ugu fiican oo adeegyada la heli karo.
Raadinta ku hanweynahay inaan la sameyn xiriir ganacsi la leedahay shirkadda Sharaf.